Kuzoba nzima ukuphila ngaphandle kukamama: umlingisi
Charles Khuzwayo | July 31, 2020
UMLINGISI weRhythm City, uLerato Zah Moloi, uthe unina owazakhela udumo ngokudlala indawo kaVho-Makhadzi kuMuvhango, uCandy Mukondeleli Moloi, uzame ngawo wonke amandla ukubekezela umdlavuza wobuchopho kodwa wagcina esekhathele ukulwa.
ULerato ubekhuluma enkonzweni yesikhumbuzo sikanina ebikubo eBryanston, eGoli izolo.
UCandy (67) ushonele esibhedlela sasePretoria ngoLwesibili emuva kokungeniswa khona exinwe wumdlavuza obumhlasele ebuchosheni.
"Ulwe njengesosha. Uzame ngakho konke kodwa ekugcineni wakhathala ukulwa. Ulwe impilo yakhe yonke. Okungiphethe kabi kakhulu ukuthi akakutholanga ukuphumula. Ubelokhu elwa, esebenza impilo yakhe yonke. Ehlale enzela abanye abantu okuthize...Uphile kodwa wangathola lutho. Bengifisa ukubona umama ephumule futhi ejabulela umhlalaphansi bese mina ngimnakekela kodwa manje kufanele ngizomngcwaba."
Uthe unina ugulile futhi ubengena ephuma esibhedlela ephethwe wumdlavuzo, okugcine sekuxhantele neminye imidlavuza okubalwa nowesisu nobusesweni. Uthe lesi sifo simphathe iminyaka emibili futhi ubese abuye adlikize.
Uthe ngemizuzu yokugcina enaye beyinzima futhi esola ukuthi akasekho emhlabeni.
"Ngakhuluma naye nginethemba lokuthi uzosinda. Ngicabanga ukuthi uzowuphonsa umbalane. Ngathandaza naye. Ngamcela. Ngamnxusa ukuba angahambi ngoba ngiyamdinga. Angikwazi ukucabanga impilo ngaphandle kwakhe. Ngiyilokhu engiyikho ngenxa yakhe. Umhlaba awunamsebenzi walutho ngaphandle kwakhe."
ULerato, oke watholakala enegciwane leCovid-19, uthe yilawa mazwi awasho kunina ngaphambi kokuba ahambe emhlabeni.
Uthe kwakungelula ukuba ayobona unina esibhedlela kodwa kwakuphoqeleka ukuba udokotela amshushumbise ngenxa yokusabela ukubhebhetheka kwesifo seCorona.
Kuvele ukuthi uCandy, owayeshade nomufi uVincent Moloi, ubenomdlavuza wengqondo futhi wake wahlinzwa ekhanda ehlaselwe yisimila engqondweni. Le nkonzo beyihanjelwe nawumsakazi weMetro FM, uWilson B Nkosi nenkakha ye-Afro pop, uYvonne Chaka Chaka obelingisa nomufi kwiGiyani: Land of Blood.
Inkonzo yesikhumbuzo yesibili izobanjelwa lapho edabuka khona eThohoyabdou eLimpopo ngale mpelasonto.
UCandy, oshiye izingane zakhe ezimbili, uLerato noTshepo nabazukulu ababili, uzofihlwa eLimpopo ngeSonto.